Anyị na-akwụ ụgwọ maka ọtụtụ ngwaọrụ iji nyochaa ndị ahịa anyị ma anyị na-anwale ọbụna karịa. Oge obula m tinyere usoro nyocha nke isiokwu zuru oke, otu ngwa oru di nkpa mgbe nile. Anaghị m emetụ ya aka ruo ọtụtụ ọnwa… ma na-ekwe ka ndebanye aha… mana mgbe ahụ…
OkwuTracker bụ ihe dị mkpa n'ihi na enweghị m ike ịchọta ngwá ọrụ ọzọ nwere ọtụtụ ihe dị iche iche ndị ọrụ ọchụchọ na-achọ maka isiokwu ọ bụla. Anyị atụlewo iwu a zuru ọdịnaya ọdịnaya maka akara gị - na isi ihe ịga nke ọma nke ọbá akwụkwọ ahụ na-aza ajụjụ ndị ọrụ nyocha ọchụchọ na-abanye. Ma, ka oge na-aga, ndị ọrụ na-enwetawanye ngwa ngwa na arịrịọ ha. Nke a bụ goldmine maka ahịa ọ bụla na-achọ iji mezue ọbá akwụkwọ ha.
N'ime ogwe na-acha anụnụ anụnụ nke OkwuTracker bụ nza nke ị nwere ike iji tinye ma wezuga okwu, tọọ ọkwa nchọta ọchụchọ, ma ọ bụ - ọkachasị - nzacha naanị isiokwu ajụjụ. Naanị tinye ajụjụ nyocha isiokwu, ma a na-enye gị usoro dị egwu nke ajụjụ ndị kachasị ewu ewu na nyocha ọnwa gara aga.